The Xiaomi Mi A1 na gam akporo Oreo na-ata ahụhụ ọtụtụ ọdịda | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Gam akporo nsụgharị, Xiaomi
Xiaomi Mi A1 bụ otu n'ime ekwentị ndị kachasị mkpa nke akara ndị China bidoro n'afọ gara aga. Ọ bụrụla nke mbụ ụdị iji rụọ ọrụ na gam akporo One.Ya mere ọ bụ nnukwu nzọụkwụ maka ika ahụ. Ọzọkwa, obere oge tupu afọ ahụ agwụ, Ejiri ndị ọrụ gam akporo Oreo melite. N'ihi ya, ọ bụ ozi ọma niile.
Ma mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ọnọdụ ahụ dị iche. Ebe ọ bụ na mmelite na gam akporo Oreo bụ ihe kpatara ọtụtụ nsogbu na Xiaomi Mi A1. Nke a gosipụtara site na ndị ọrụ na-ekiri na ngwaọrụ ha na-ada. Kedu ihe na-aga?
Xiaomi kwere nkwa na mmelite ahụ ga-enweta ekwentị tupu njedebe nke 2017. N'ikpeazụ, emesịrị melite mmelite ahụ n'otu Disemba 31. Mana, ọ dị ka akara ahụ agara ọsọ ọsọ iji nweta oge a kara aka. Dị ka ọ na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nsogbu.
Xiaomi Mi A1 ọrụ na-akọ ọtụtụ ndị dị iche iche chinchi ebe ha nwere gam akporo Oreo arụnyere na ọnụ gị. Ndị a bụ ụfọdụ chinchi ndị ndị ọrụ kọọrọ ugbu a:
Ngwa igwefoto na-emechi na-atụghị anya ya
Oké batrị igbapu na ndabere ngwa n'agbanyeghị Doze ekwe ka mma batrị management.
Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-agba ọsọ nke njikwa mmegharị
Ọtụtụ ngwa kwụsị ịrụ ọrụ na ị ga-amanye imechi ha
N'ọtụtụ oku ọ gaghị ekwe omume ịnụ onye na-akpọ oku
Ngosipụta Ambient akwụsịla ịrụ ọrụ nke ọma
Njikọ Bluetooth na 4G na-enye nsogbu arụmọrụ yana nke mbụ na-eji ọtụtụ batrị
Mmehie ndị dị ọtụtụ, ma ha niile nwere ihe jikọrọ ha na ha na-eji ekwentị eme ihe ka njọ Maka ndị ọrụ. N'ezie, ọ dị ka ọnọdụ ahụ adịghị mma, na ndị ọrụ Xiaomi Mi A1 kwadoro izere mmelite na gam akporo Oreo.
Dịkarịa ala, ọ bụghị imelite n'oge na chere ka Xiaomi dozie ọnọdụ ahụ ozugbo enwere ike. Ọ dị ka ngwa ngwa ahụ adịghị mma maka ụlọ ọrụ ahụ doro anya na ọ ga-edozi nsogbu a ozugbo enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Mmelite a na gam akporo Oreo na-akpata ọdịda na Xiaomi Mi A1
N'ezie, na mgbakwunye: nsogbu na njikwa nke ọkwa, nsogbu na mmekọrịta nke ozi ịntanetị, mkpochapụ oku na mberede, njehie mgbe niile na kọntaktị, enweghị ọrụ ngwa ngwa ... Etc, wdg
Nnukwu ndudue ịhapụ ụdị beta dị ka nnukwu ngwaọrụ a, ọ rutere m nkwụsị nke iji ya na ịlaghachi na ekwentị m ochie .. Ọ bụ ihe ihere.
Enwere m Mi A1 emelitere na Oreo na achọpụtaghị m nsogbu. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-arụ ọrụ zuru oke, oku na-aga nke ọma ... Ọ bụrụ na emechila ngwa ọ na-adị nnọọ oge, amaghị m ma ọ bụrụ na ọdabara maka mmelite ahụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ịmanye imechi ngwa ndị ahụ, enwere m obi abụọ na ọ bụ nsogbu. Ma, ihe ị na-ekwu, ọ dị gị ka o nwere ihe ọ bụla na-eju gị anya! Ọ dabara nke ọma!
Bluetooth acksụ m batrị si a otutu. Ahụla m na m na-etinye 45% na-enweghị iji ya, dịka ọmụmaatụ, jikọọ otu ekweisi ..
O meela gi kemgbe emelitere? N'ihi na nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ kọọrọ kemgbe emelitere mmelite ahụ. Ya mere enwere ike ịkọ ya.
Ebe obu na emelitere m. Na gam akporo 7 o nwere ihe dị ka awa 4 nke ihuenyo, ugbu a, ọ dị nkezi nke 5 awa na obere. Anọ m na-eji oreo ihe dị ka ụbọchị 2 ma na mbụ, echere m na ụfọdụ ngwa na-agwụ batrị m, mana ihe ịtụnanya m buru ibu mgbe m hụrụ na bluetooth bụ onye mere ihe. Na enweghị ama m nwere ugbua ma enwere ole na ole, oriri batrị site na ọrụ a abụwo ihe na-asọ oyi.
N'agbanyeghị, enwere m Bluetooth na-arụ ọrụ mgbe niile ka ndị agha m 2 na-ama jijiji mgbe m natara oku. Ebe ọ bụ na ọrụ m nwere ya na-agbachi nkịtị. Tupu, oriri batrị maka ọrụ a bara ezigbo uru yana ngwa ndị ọzọ dịka WhatsApp na ụfọdụ egwuregwu bụ ndị mụbara oriri batrị.
Enweghị m ọtụtụ n'ime nchinchi ndị a, ndị mmadụ bụ na ha na-emelite na-enweghị ntighari ma ha na-etinye oreo na unyi mgbe ahụ ihe na-eme, n'ezie ọ nwere ihe ya, mana ọtụtụ nchinchi a na-akọ, mba, ọbụlagodi anaghị m ata ahụhụ ha, Dịka e kwuru n'elu, ihe bluetooth bụ ahụhụ na-ese onyinyo karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Emelitere m na 5th, enweghịkwa m nsogbu ọ bụla ị kọọrọ, ngwa 0 dara, mgbagha 0, batrị na-ekwusi ike, echekwara m na oge ọ kara, ọ bụrụ eziokwu na ọ dị ọcha ebe ọ bụ naanị nwere ọnwa na ọkara, na nkenke ugbu a na-enweghị nsogbu.
Na-egbuke egbuke dijo
Enweghị m nsogbu ọ bụla a kpọtụrụ aha, okwu nke akara a bụ na ọ bụrụ na nhọrọ nke mmegharị ahụ anaghị arụ ọrụ ma ị melite mgbe ahụ ị ga-atụfu ya ebe ọ na-enweghị ike ịrụ ọrụ na oreo, echere m na m gụrụ ebe ahụ.
My batrị mara mma, m nwedịrị ike meziwanye, ọ na-ebubo ọbụna ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ, gbasara bluetooth enweghị m ike ikwu okwu, anaghị m eji ya
Nnọọ. Enwere m A1 ma jiri ụdị ochie nke gam akporo ọ rụrụ ọrụ dị mma. Mana mgbe ị na-emelite Oreo, mgbe ị na-akpọ oku, agbanyeghachiri m na gam akporo Otu ihuenyo ọ bụghị mgbe niile kama ọtụtụ oge. It meela mmadụ? Onwere onye maara ka esi edozi ya?
Ndewo, Mi A1 na mmalite nke mmelite enweghị nsogbu ọ bụla, ihe ọzọ bụ na ọ na-aga nke ọma (ọ na-ekwughi na tupu mmelite ahụ dịkwa mma). Mana n'oge ahụ keyboard ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ nke ọma, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ mmelite a ka ị na-ekwu, ebe ọ bụ na ọ naghị ata ahụhụ site na bluetooth, igbochi ngwa ma belata oku. Olileanya na ha ga-edozi ya n'oge na-adịghị anya.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga - eme na mmelite ahụ, mana ebudatara m pdf faịlụ site na ibe ụfọdụ wee m gbalịa ịkekọrịta ya site na wassap ọ gwara m na »faịlụ ahọpụtara abụghị akwụkwọ» ma ana m eme site na ọdụ ọzọ bq, a motorola ma hapụ m ka m mee ya na enweghị nsogbu. Agam agwa gi ugbu a na amaghi m ma o ga-adabere na oreo, mana m ga-ahapu ya ebe a ma o mee onye obula n'ime gi, i choro ikwu okwu na ya. Kpọmkwem, n'okpuru pdf sitere na blọọgụ wee budata ya m na ngwa faịlụ nke na-abịa na ndabara, site n'ebe ahụ ana m anwa ịkekọrịta pdf na kọntaktị ọ bụla ma ọ gaghị ekwe m. Ọ naghị eme m na faịlụ niile mana ụfọdụ nwere…. Ahapụrụ m ya ebe ahụ.
Zaghachi francisco javier carcedo gonzalez
Enwere m mmechuihu, ọtụtụ njehie ebe ọ bụ na emelitere ya na mbipute 8.0, ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ọ na-etinye ya oke, ọ naghị azaghachi aka ahụ, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-ada ọtụtụ, na njedebe ọrụ ekwentị dị oke egwu. .
Zaghachi Misael Muñoz
The Galaxy J2 Pro (2018) na-egosi na weebụsaịtị Samsung Vietnam